Qaabdhismeedka Sinaanta ee Gaadiidka Seattle - Transportation | seattle.gov
Taariikhda siyaasadaha cunsurinimada iyo maal-gashiga ayaa abuurtay sinnaan-la'aan xagga nidaamka gaadiidka ah, oo ay ku jiraan safarka dheer ee bulshooyinka midabka leh marka loo eego dhiggooda cadaanka ah barokaca awgeed, iyo inta badan helitaanka adeegga gaadiidka tayada sare leh. Iyadoo bulshooyinka midabka leh ay wax yar ka geystaan wasakheynta, waxay si aan sinan ahayn ula kulmaan saameynta muddada fog ee midab-takoorka, oo ay ku jiraan helitaanka fursadaha iyo hantida oo xaddidan. Ku darida Qaabdhismeedkan Sinaanta Gaadiidka (TEF) ee cusub siyaasadaha iyo hawlgallada waaxyaha waa tallaabo dhanka wax ka qabashada arrimahan.
Kooxda Shaqaynta Sinaanta Gaadiidka (TEW) ayaa la aasaasay horraantii 2019 si ay talo uga raadiso xubno ballaaran oo kala duwan oo xubno bulsheed ah oo matalaya Black, Asaliga, iyo Dadka Midabka leh iyo bulshooyinka nugul. Xubin kasta oo ka tirsan TEW waxay ku xiran tahay ururada maxaliga ah ee ka jira gobolka Seattle degmada King waxayna adeegsadaan waayo-aragnimadooda iyo aqoontooda xirfadeed si ay u aqoonsadaan falalka caawinaya xallinta caqabadaha la xiriira gaadiidka. Fikraddooda waxaa loo adeegsaday qeexidda qiyamka iyo xeeladaha TEF, kaas oo hagi doona falalka shaqaalaha Waaxda Gaadiidka Seattle sannadaha soo socda.
Iyada oo ku saleysan yoolalka la wadaago ee Barnaamijka Sinaanta Gaadiidka (TEP):
TEF waa khariidad loogu talagalay go'aamiyeyaasha SDOT, shaqaalaha, daneeyayaasha, la-hawlgalayaasha, iyo bulsho weynta si ay si wadajir ah u abuuraan nidaam gaadiid oo siman.
Dhismaha laga soo bilaabo City of Seattle's Race and Social Justice Initiative (RSJI), TEF waxay wax ka qabtaa faraqa ka jira nidaamka gaadiidka ee ay sababto cunsuriyadda hay'adaha.
2021, SDOT waxay sii waday inay la shaqeyso xubnaha TEW si ay u naqshadeeyaan Qorshaha Hirgelinta. Laga bilaabo Jannaayo ilaa Ogosto 2021, shaqaalaha SDOT iyo xubnaha TEW waxay iska kaashadeen shirar isdaba joog ah oo u sahlay ka qaybgalayaasha inay dhistaan xiriir qoto dheer, si firfircoon u dhegaystaan, iyo si halabuur leh oo ay maskaxdooda u abuuraan qorshe fulineed.
Qalabka Qaab-dhismeedka Sinnaanta
Qaabdhismeedka Sinaanta Gaadiidka, Qaybta 1: Qiimaha iyo Xeeladaha
Qoraalka Sinaanta Gaadiidka (Daabac oo Wadaag)
Qaab-dhismeedka Sinaanta Gaadiidka Folio
Qorshaha Hirgelinta TEF
Orshaha hirgelinta waxa ku jira xeelado horumarinaya qiyamka iyo xeeladaha lagu qeexay Qaybta Koowaad ee TEF:
Xeeladahani waxay u kala duwan yihiin qaybo kala duwan laga bilaabo u doodista, siyaasadda, barnaamijka, mashruuca ilaa xeeladaha isbeddel dhaqameed ee waaxdayada sida hababka gudaha iyo hababka ugu wanaagsan.
Qorshuhu wuxuu soconayaa 2022 ilaa 2028, marka la fahmo waa dukumeenti firfircoon oo si joogto ah loo hagaajin doono, loola socon doono, loona cusbooneysiin doono.
Dashboardka qorshaha fulinta is dhexgalka ee hoose waxa ku jira in ka badan 200 oo tabo oo ay habeeyeen qiyamka TEF. Baar si aad wax badan uga barato!
Ka eeg dashboard-kan daaqad/tabo cusub.
Ilo wareedyo ayaa laga soo xigtay:
Isbeddellada Gaadidka-La Xiriira Soo-gaarista Wasakhowga Hawada ee Jinsi-Qowmiyada iyo Xaaladda Dhaqaale-bulsheed
Sinnaan la'aanta isticmaalka badeecadaha iyo adeegyada ayaa ku sii kordhinaysa farqiga u dhexeeya qowmiyadaha ee soo-gaarista wasakhowga hawada
Fahamka Kala duwanaanshaha Qoomiyada ee Soo-gaarista Wasakhowga Hawada ee La Xiriira Gaadiidka
Dadka midabka leh ee ay sida daran u saamaysay wasakhowga hawada ee ku dhawaad dhammaan ilaha
La kulan Kooxda Shaqada!
Ma xiisaynaysaa yaa qayb ka ah Kooxdayada Shaqaynta Sinnaanta Gaadiidka?
Wax dheeri ah ka baro
Maareeyaha Barnaamijka Sinaanta Gaadiidka